Qodobo Salaada Awood Leh Oo Ka Soo Horjeeda Saamaynta Xun | TILMAAMAHA SALAADA
Bogga ugu weyn Dhibcaha salaadda Qodobbada Salaadda Awoodda leh ee Ka Soo Horjeeda Saamaynta Sharka
Qodobbada Salaadda Awoodda leh ee Ka Soo Horjeeda Saamaynta Sharka
Maanta waxaan la tacaali doonaa qodobbada salaadda ee xoogga leh ee ka dhanka ah saameynta xun. Saamaynta xun ayaa macnaheedu noqon karaa eedeymo been ah ama xiriir dembi leh oo lala yeesho qof kale. Waxaa jira maxaabiis aad u badan oo ku jira xabsiga kuwaas oo aan wax dambi ah ku lahayn dambiyada lagu soo oogay xabsiga, laakiin maadaama ay ku lug lahaayeen, ma jiraan wax ay samayn karaan si ay naftooda u badbaadiyaan. Saamaynta xun ayaa meel kasta ka dhici karta. Waxay noqon kartaa goobtaada shaqada, waxay noqon kartaa dugsiga, bulshadaada, sidoo kale waxay ka dhici kartaa kaniisadda.
Waa inaad ogaataa in mararka qaarkood intaan fal -dambiyeedka la samayn, waa inay jiraan isbahaysi xun oo ka dhan ah dhibbanaha. Buugga TIRINTII 16: 3, Markaasay dhammaantood u wada shireen Muuse iyo Haaruun, oo waxay iyagii ku yidhaahdeen, Idinku aad isu qaata, maxaa yeelay, shirka oo dhammu waa quduus, oo kulligood Rabbiguna waa dhex joogaa iyaga. Haddaba maxaad Rabbiga ururkiisa isaga sara marisaan? Qorax wuxuu isbahaysi la sameeyay odayaashii reer Isreal oo ka soo horjeeday Muuse iyo Haaruun. Waxaa lagu eedeeyay inay isku dayeen inay xukunka la wareegaan. Haddii aysan ahayn faragelin rabbaani ah oo waqtigeedii ku dhacday oo Ilaah ah, Muuse wuxuu ku lug lahaa.
Sidoo kale, aan baranno noloshii Yuusuf. Xaaska sayidkiisa Potifhar ayaa ku eedaysay isaga ka dib markii ay ka codsatay in Yuusuf yimaado qolkeeda jiifka. Saameyntani waxay Yuusuf ku ridday xabsi. Tani waa sida saamaynta sharku u shaqayso. Uma shaqayso qof aan karti lahayn, diiraddu waxay mar walba saaran tahay qof leh karti aad u weyn. Tusaale ahaan, waxaad ku fiican tahay goobtaada shaqada, waxaana laguu doortay inaad tahay qofka ugu macquulsan ee lagu dallacsiin karo
Cadowgu wuxuu qori karaa dadka si ay kuugu eedeeyaan shaqada, taas oo horseedaysa bixitaankaaga aan caadiga ahayn.
Intaa waxaa dheer, waxay ka dhici kartaa dugsiga. Waxaan maqalnay kiisaska arday dhalaalaya oo caqli badan oo dugsiga laga eryay sababo la xiriira khaladaad imtixaan. Waxaa cad in ay ku lug lahaayeen. Maanta, waxaan ka baryi doonnaa isbahaysi kasta oo jinni ah oo loo sameeyay inuu ku lugleeyo ama hoos kuu dhigo. Sayidku wuxuu ku soo booqan doonaa axdiga cadaawayaashaada gacantiisa aargoosiga, wuxuuna baabbi'in doonaa wax kasta oo jinni ah oo loo qorsheeyay inuu kaa shaqeeyo.
Waxaan ku amrayaa awoodda jannada, wax kasta oo xumaan ah oo lagugu soo abaabulay maanta waa lagu burburiyey magaca Ciise. Nin kasta iyo naag kasta oo isu qoondeeyay inay noqdaan aalad gacanta cadowga ku soo gelisa, waxaan ka baryayaa in Rabbigu maanta ku xukumo magaca Ciise.
Si aad u ogaato in shaydaanku ku lug leeyahay, waxaad ogaan doontaa in dad yar oo muhiim ah ay si dhab ah u rumaysteen inaad samaysay wixii laguu eedeeyay. Sidoo kale, geeddi -socodku aad buu u dhakhso badan yahay oo aadan awoodin inaad ka fikirto. Waxa kale oo laga yaabaa inaad ogaato in lagu neceb yahay isla goobtii lagugu jeclaa shuruud la'aan. Waxaa lagugu diidayaa isla goobtii aad markii hore lagu dabbaaldegi jiray. Markaad aragto mid ka mid ah arrimahan, waa inaad ogaataa in saamayn shar ah ay kaa shaqaynayso. Ha ka raagin inaad tukato salaadaha soo socda.
Aabbaha Rabbi, waan kuugu mahad naqayaa sababtoo ah mar walba waad i dhageysataa. Waxaan kaaga mahadcelinayaa ducadaada iyo bixintaada. Waan kuugu mahad naqayaa maxaa yeelay inaadan u oggolaan qorshayaashii cadowgu inay noloshayda ka adkaadaan; magacaagu ha ku sarreeyo magaca Ciise.
Sayidow, waxaan ka soo horjeedaa wakiil kasta oo ku lug leh cadowga. Waxaan ku amrayaa awoodda jannada, dabka Ruuxa Quduuska ah ayaa baabi'iya nooc kasta oo wax -yeello ah.
Sayidow, nin kasta iyo naag kasta oo isaga ama iyadu ka dhigtay aalad gacanta cadowga si ay ii soo dhex gasho, maanta waxaan ku baabbi'in doonaa dab magaca Ciise.
Sayidow, shirqool kasta oo shar ah oo layga geesto waxaa laga dhigay wax aan waxtar lahayn magaca Ciise. Sayidow, shirqool kasta oo layga maleegayo goobta shaqada si loo burburiyo sannadihii aan u adeegay, ayaan maanta ku baabi'inayaa magaca Ciise.
Aabbe, shirqool kasta oo shar ah oo layga dhex sameeyo beeshayda si aan u xumeeyo sumcadayda, waxaan ku amrayaa awoodda jannada inay noqon doonaan dadaal aan waxtar lahayn magaca Ciise.
Sayidow, Qorniinku wuxuu leeyahay waxaad leedahay qalbiga dadka iyo boqorrada, oo waxaad u toosisaa sida socodka biyaha. Sayidow, waxaan amar ku bixinayaa, nin kasta iyo naag kasta oo maalka leh oo qalbigoodu sun igu noqday, waxaan kaa baryayaa inaad maanta fikirkooda ku beddesho magaca Ciise.
Sayidow, waxaan ku taaganahay ballamihii eraygaaga. Waxaan ku noqday cabsi argagax leh awoodda saamaynta xun ee magaca Ciise.
Sayidow Ilaahow, shirqool kasta oo shirqool layga dhigayo, waxaan maanta ku booqdaa xeradooda dabka ruuxa quduuska ah. Waxaan kaa baryayaa inaad maanta dhexdooda ku abuurto jahwareer magaca Ciise.
Sayidow, waayo, waa qoran tahay, Hub laygu sameeyey oo liibaani maayo. Waxaan ku baryayaa awoodda jannada, qorshe kasta iyo ajendaha cadowga iga soo horjeeda si ay dhibaato iigu soo degto ayaa lagu burburiyey magaca Ciise.
Shey kasta oo dambiile ah oo si qarsoodi ah loogu meeleeyay meeshayda si ay iigu lug yeelato shaqada, waxaan ka baryayaa in awoodda Ilaah iyaga ku baabbi'iyo magaca Ciise.
Aabe Sayidow, si kasta oo cadowgu wuxuu iga dhigay bartilmaameed aan ku lug yeesho, waxaan maanta ku shaabadeeyaa magaca Ciise.
Sayidow, waan jebin doonaa qalcadda kasta oo gudcurka ah ee igu wareegsan si ay dhibaato iigu soo degto. Waan burburiyaa kanaal kasta oo isku xira aniga iyo saamaynta xun ee magaca Ciise.
Sayidow, waxaan maanta ku aamusay afka eedaysane shar leh magaca Ciise. Si kasta oo eedaysanuhu u qorshaynayo inuu i khilaafo, jidkaas ayaan ku burburiyaa magaca Ciise.
Rabbiyow, waxaan baabi'inayaa axdi kasta oo shar ah oo saamayn xun ku leh noloshayda iyo aayahayga maanta. Waxaan caddaynayaa inaanan ku lug yeelan doonin magaca Ciise.
eedeymo been ah
article Previous10 Mabaadi'da Baybalka ah Qof kasta oo Ganacsade Masiixi ah waa inuu raacaa
Next articleQodobbada Salaadda ee Waxyaabaha Wanaagsan Oktoobar 2021
Hermann Oktoobar 8, 2021 saacadu markay tahay 12:08 pm
Aad bay u weyn tahay
Qodobbada Salaadda ee Dib-u-dhigga
Qorshe akhriska buugaagta ee maalinlaha ah ee KJV October 15th 2018
Akhrinta buugaagta ee maalinlaha ah ee maanta oo ah Oktoobar 16keeda 2018